Software Tracking Software Iyadoo 20 + Warbixinta Pipeline Sales
Falanqee Hawlaha Ganacsiga & Macaamiisha
Soo hel runtii awood leh, laakiin warka dhabta ah ee fudud.
14 Maalmo tijaabo oo lacag la'aan ah. Looma baahna kaarka deynta.
Fiiri waxa aad iibsanaysid dadku
Imisa farriimo oo ay soo direen, waxay ku baaqeen inay sameeyaan, hoggaamiyeyaal ay ka heleen iwm.
Hel jumlada waqtiga dhabta ah ee iibka
Waxay kaydisaa dhawr saacadood oo lid ku ah abuurista warbixinno & sugitaanka warbixinnada.
Warbixin kasta oo aad u baahan tahay waxay noqon doontaa guji.
Raadso waxtarka guud ee iibka oo aad la kulanto bartilmaameedkaaga
Ku dar siinta shaqsiyaadka ka dhanka ah midba midka kale
Abuuri Warbixinnada intaad ku sugantahay Kulanka
Oo qaado go'aano ku saleysan xaqiiqda, mana aha maleyn
Hel metrics aad u baahan tahay
Gadiidka, qiyaasta suuqyada, sicirka ugu dhow, waxqabadyo, isbarbardhig
Wixii Wareeg ah Wakhti kasta
Bilihii ugu dambeeyay 6, maalmaha 30 ee ugu dambeeyey, Bishii ugu dambeysay,
XADKA 2 ee ugu dambeeyay iwm
Sawirada cabsi leh
Eeg sida fudud
Muuji Jidka aad rabto
Waxaad dooran kartaa noocyada kala duwan ee jaantusyada / jaantusyada. Waxaad sidoo kale bedeli kartaa shaxda 1 guji.
Isticmaal bareegyada gaarka ah / Miisaska
Waxaad samayn kartaa warbixin ku saabsan goobaha / miisaska gaarka ah, sida goobaha / miisaska caadiga ah.
Falanqee wax kasta
Waxaad ku falanqeyn kartaa wax kasta oo la mid ah
Qandaraaska Quarters 3 ee ugu dambeeyay
Ganacsatada ayaa lumiyay shuruudihii ugu danbeeyay ee 12 ee iibiya
Tirada celceliska emaylka loo diro
Fiiri Isbuucyada / Bil kasta / Quarterly / Yearly Reports
Waxaad si sahlan kuugu dari kartaa filtarrada sida bilihii 3 ee ugu dambeeyey, 7-da ugu dambeeyey iwm. Mar kasta oo aad aragto warbixinta, nidaamka ayaa si toos ah u xisaabi doona muddada oo tusi doonaa warbixinta aad u baahan tahay.
Eeg Wargelinta Qofka iibiya
Waxaad sidoo kale arki kartaa warbixinnada iibka
Si fudud ayaad u xakameyn kartaa warbixintaada diiwaanka gaarka ah, mudada ama isticmaalayaasha adigoo ku daraya filtarrada. Kaliya dooro beerta waana xaalad. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa filtarrada badan.